AJIGU WAA GOB SABTUNA WAA GUN !!!!!
Soomaalidu waxay u kala baxdaa Aji iyo Sab ama Jileec iyo Jareer. Ajigu waa dadka is sareysiiya Sabtuna waa dadka la liido. Jileecii baa usii kala baxa Bilis iyo Boon oo ah inta Ajiga ah iyo inta Sabta ah. Jareerkuna waa gooni oo dadka ay Soomaalidu ku caayaan Adoon. Waxaa kaloo la isticmaalaa WAA GOB IYO WAA GUN oo laga wado Sareeye iyo Hooseeye ama Laan dheere iyo Laan gaab. Markaa guud ahaan Soomaalidu waa Aji iyo Sab, sida ay Soomaalidu ugu dhawaaqdaana waa AJI ee ma shidna mana loogu dhawaaqo AJJI.
Waxaa xusid mudan in la ogaado in magaca AJI uu xambaarsanyahay Sareyn, Kibir iyo Isfatooshin halka magaca SAB-tuna lagu sifeeyo Hooseyn, Dulinimo iyo Xaqirid. Magacan Aji waa magac soo jiray waa hore oo lahaa sifada uu maanta ku leeyahay af soomaaliga. Waxaa xusid mudan in la sheego in Dadkii hore ee deganaa Soomaaliya ay xiriir ganacsi iyo mid dhaqanba la lahaayeen Bariga dhexe, Masaaridii hore, Beershiya, Hindiya, Shiinaha iyo Beriga Fog. Haddaba waxaa haboon in macnaha magaca laga raadiyo intaas oo dhan ee aan lagu koobnaan meel qudha, oo lasameeyo isbarbardhig luqadeed lana eego inay jirto cid isticmaali jirtay magacaa Aji, macnihiisii iyo cid weli maanta isticmaasha. Magacan waxaa laga isticmaali jirey wadamadii aanu xirrirka la lahayn oo dhan isagoo xambaarsan isa sareysiin iyo weyneyn marka laga reebo bariga dhexe oo uu markii danbe ugu yimid magac ahaan ka dibna ay dad yari ula baxeen ilmahoodii. Waxaa weli laga helayaa Shaam iyo Masarba dad dhif ah oo awoowayaashood lagu magacaabi jirey AJI, haddase aad uma badna. Laakiin weli Bariga Fog wuxuu ka yahay magac lala baxo oo macnihiisu yahay Boqor, Sayid, Sareeye iwm. Bal aanu isla eegno Tusaalayaashan:
1-Jasiiradii waayadii hore gnacsiga loo aadi jirey laguna sii nasan jiray ee Okinawa qabqablayaashii dagaalka ee ka talin jirey waxaa lagu magacaabi jirey AJI oo la macna ah Madaxya weyntii (Lords). Waxaanu oran karnaa qabqablayaasheena dagaalku(WAR LORD) waa “SHAR AJI”, maadaama Aji uu lamid yahay Lord, King iwm!
2-Magacii uu lahaa ninkii boqorka ahaa ee ka talin jirey Brunei Islamka hortii oo la oran jirey SANG AJI oo ka soo jeeda kutubta ku qoran Snaskrit ee Hinduga oo macnihiisu ahaa Boqorkii sareeyey ee dhahirnaa(Reverend Monarch).
3-Waxaa xusid mudan ilaa maanta marka ay carruurta ree Hindiya doonayaan inay yiraahdaan Ayeeyo waxay yiraahdaan AJI oo ay ula jeedaaan tii wax walba garanasay, tiiweyneyd tii sharafta badnayd.
4-Dadka ku nool jasiirada SUMATRA ayaa iyagana waxaa qabiilkooda la yiraahdaa AJI afkoodana waxaa la yiraahdaa AF AJI. Waa meesha aanu maanta ka niraahno AF MAXAATIRI waayo waa af AJIGU sameystay dhawaqiisa iyo ereyadiisa SAB-tiina ku qasbay halka afkii hore ee lagu hadli jirey ay noo keydiyeen oo ay weli ku hadlaan DIGIL IYO MIRIF iyo QOWMIYADA OROMADU!
5- Jasiirada JAVA oo magaca Aji wuxuu la micna yahay Boqor
Waxaa laga garan karaa halkaa in Bariga fog iyo Hindiyaba ay weli magacii u isticmaalaan sida maanta micnihiisu ka yahay Soomaaliya. Laakiin Bariga dhexe wuu ka lumay oo waayadan lama baxaan, waxaan isleeyahay maadaama uu yahay magac xambaarsan awood iyo sareyn iyo xaqirid in caqiidada Islaamka uu ka hor imanayo oo uu sidaa ku suulay(Eebe ayaa Og). Magacu wuu lumi karaa ama isticmaalkiisa ayaa jiilalka danbe ku yaraada sidii Suubanaha Magaciisii aysan Carabtu ula bixi jirin laakiin uu ahaa magac quruumihii hore ay labixi jireen(Mahmet, Ahmet, Hamada iwm), Laakiin markii Suubanuhu dhashay ayuu soo shaacbaxay. Magaca Mohamed oo dhowr si u qoran ayaa ku qornaa Kutubtii Injiil, Towreet iyo Kutubada Vedas ee Hinduga.
Bal ka fikir magaca Mohatma Gandhi?
Afafku waa isgalaan raad fogna way isaga tagaan. Bal dhugo marka qofka reer Kuuriya uu leeyahay Mahadsanid wuxuu oranayaa KHASMAY HAMIDA! Hamdi, Hamid, Hamud, Mohmud, Mohmed waa isku asal oo waxay macneynayaan Mahad, Amaan iwm
Isbaanishku markuu ku salaamayo wuxuu oranayaa OLA! oo ka soo jeeda ALLAH waayo waxaad ogtihiin in Islaamku haystay in ka badan 800 sano ISBEYN, weliba waxay isticmaalaan magacyo badan sida Omar, Kabir, Yasmin, Rauuf, Fatima iwm
Markaa layaab ma leh in magac hore oo qolo ka dhintay qolo kale ay weli haysato waxay
ka mid tahay cajaaibta luqadu leedahay marka loo sii dhaba galo iyo weliba adeegsida si loo helo taariikhda saxda ah ee dadka aan qoraal lahayn sideenoo kale!
SAB waa magac la liido oo la hooseysiiyo wuxuuna ka soo horjeedaa AJI oo ah magac sareeya oo la sharfo. Waxaa dadku yiraahdaan waxay ka soo jeedaa kelimada SAB luqado ajnabi oo hor, sheegaysana hooseyn(Sub) laakiin anigu weli iima cada oo ma haleelin. Waxaanse la yaabaa maxay dadka qaar u yiraahdaan waxaan ka imid SAB ama ZAB iyagoo ula jeeda ALLABARI! Ma waan soo baryootamayey miyaa!
GUN waa meesha ugu hooseysa ee shay leeyahay. Maansada Soomaalidu isu mariso ayay aad uga buuxaan GUN, GOB, SAB, AJI, MIDGAAN, TUMAAL, ABBAAN iwm waxaanad ka fahmi kartaa dhibaatada iyo xaqirida lagu hayo dadkaa; tusaale kuugu filan
Sayidka oo u jawaabayey Cali Dhuux: “ADIGUNA ABBAANOW MIDGAAN URAYA SOW MAAHID….” Micnaha waa Isbarbardhig:Xumaan, Qaabdarro iwm = MIDGAAN
Waxaan la yaabaa sheekooyinka laga sheego dibadaha ee ah in Soomaaligu uu maxkamad la tegayo qofkii liida ama midabtakoora isagoo ku dacwoonaya wuxuu igu yidhi ADOON, MADOW, DAANYEER,WAXSHI iwm kuna qaylinaya Xoriyadeydii iyo shaqsiyadaydii buu meel uga dhacay !
HADDII AAD AJIYOW DAREENTAY KULEYLKA AY LEEDAHAY TAKOORIDU MAXAA KAA SI AH OO AAD WALAALKAA U TAKOORASAA!!!!!!!!
» MADHIBAAN IYO AJJI: JAWAAB QORAALADII EELAY [C/Waxid]
» AJIGU WAA BINU QUREEYSH MADHIBANKUNA BINU..!!!!! [Eelay]